Sports – Page 4 – Puntland Voice
Weeraryahanka Xulka Qaranka Soomaaliyeed oo ku biiray kooxda Elverum ee wadanka Norway
Weeraryahanka Xulka qaranka K/cagta Soomaaliya Ciise Aaden Abshir ayaa Arbacadii ku biiray kooxda Elverum FC ee wadanka Norway, waxana uu la saxiixday kooxda Elverum qandaraas kooban oo muddo lix bilood ah, iyadoo marka uu dhammado ay dhici karto inuu u […]
Kooxdqa Real madrid oo 18 kadib ku guuleysatay Copa Del Rey
Kooxda kubada cagta ee Real-madrid ee dalka Spain ayaa 18 sano kadib hanatay xalay Koobka loo yaqaan Copa Del Rey markii ay fiinaalaha isugu soo hareen kooxda uu xifaaltana kala dhexeeyo ee Barcelona. Ciyaarta oo 90-kii daqiiqo loogu talo galay […]
Dhaawac soo gaaray Cristiano Ronaldo
weerark yahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa la soo sheegayaa inuu soo gaaray dhaawac dhanka bowdada ah. dhaawaca laacibkaani soo gaaray ayay dhaqaatiirtu ku sheegeen inuu sababay in ugu yaraan asbuuc uusan garoomada soo geli karn. war ka soo […]
Balotelli iyo De Rossi oo laga saaray xulka Italy
Tababare Cesare Prandelli ayaa ka saaray xulka qaranka Italy weeraryahanka Manchester City Mario Balotelli iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Roma Daniele De Rossi, wuxuuna tababaraha arintan sabab uga dhigay inay jebiyeen xeer anshaxeedka isaga u degsan. Xulka Italy ayaa isku diyaarinaya […]
Dirk Kuyt, inta Nolashayda ka dhimana waxaan sii joogi doonaan Kooxdayda Liverpool
Ciyaaryahanka u dhashey dalka Holland una ciyaara kooxda Liverpool ee ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa ka hadlay wararka sheegaaya inuu ku biiraayo kooxda Inter Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga. Dirk Kuyt ayaa shir jiraa’id uu qabtay sheegay […]
Ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee Soomaaliya oo ka qeybgalaya tartanka ka socda Magaalada Nayroobi
Koox ka tirsan ciyaartoyda Soomaaliyeed ee Ciyaaraha fudud ama oradada ayaa ku sugan Magaalada Nayroobi ee Dalka Kenya halkaasoo uu ka socdo tartan oradada afrika. Faarax Cali Macalin oo ah xoghayaha guud ee ciyaaraha fudud ayaa hogaaminaya ciyaartoyda Soomaaliyeed waxaana […]
Xulka K/cagta ee Dalka Spain oo Xalay ku guuleystay Koobka Aduunka.
kadib ciyaartii ugu danbeysay ee xalay loogu tartamayay ciyaaraha k/cagta aduunka ayaa waxaa isaga hor yimid Xulalka kubada cagta Spain iyo Holand, waxaana ay ku soo idlaatay 90-kii daqiiqo 0-0 Sida sharciga isboortigu yahayba waxaa kagu daray 30 daqiiqo oo dheeraad […]